Ciidamo ka tirsan Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa qarax Miino oo nuuca meelaha fog fog laga hago lagula eegtay duleedka degmada Balcad oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qaraxan ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhaxeysa degaanada Haansheekh iyo Golaley oo ku yaalla duleedka degmada Balcad, waxaana la sheegay in qaraxaasi uu qabsaday mid ka mid ah Gaadiikii ay wateen Ciidanka AMISOM ee wadadaasi ku socdaalayay.
Ciidamada Qaraxa lala eegtay ayaa ka baxay magaalada Muqdisho waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Jowhar, balse inta aysan Jowhar gaarin iyaga oo dareensan in wadada ay kala kulmi karaan Qaraxyo ayuu mar qura qaraxaasi qabsaday.
Wasiirka Amniga maamulka Hirshabeelle ayaa Idaacadda Radio Baidoa u xaqijiyay Qaraxan, wuxuuna sheegay in aysan jirin khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo Ciidamada AMISOM soo gaaray, marka laga reebo mid ka mid ah Gawaaridooda oo burbur uu soo gaaray.
Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa maalmahan waxa ay wadaan Howlgallo gaar ah oo ay ka sameynayaan wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar, waxaana ay Katarbiilo gelinayaan geedaha ka akdhow wadooyinka, si aysan halkaasi ugu soo dhuumaaleysan Dagaalyahanada Shabaab.